बुटवलको कोरोना अस्पतालमा बिरामीलाई औषधी पुर्याउन ‘सिस्टर रोबोट’ प्रयोग गरिने – Swasthya Samachar
August 5, 2020 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले संञ्चालन गरेको बुटवलको कोरोना विशेष अस्पताल धागोकारखानामा विरामीलाई औषधी पुर्याउन सिस्टर रोबोट प्रयोग गरिने भएको छ ।
त्यसकालागि युएनडिपीले रोबोट उपलब्ध गराएको छ । युएनडिपिका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्याल र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले रोबोट बुधबार अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापालाई हस्तान्तरण गरे ।
दुई साता लकडाउन गर्न सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव